Ndingakuphepha Njani Ukutyeba | Abafikisayo
IBhayibhile ikhuthaza ukuba ‘sibe ngcathu ngemikhwa.’ (1 Timoti 3:2) Kunjalo ke nasekutyeni. Ngoko kutheni ungazami la macebiso?
Yeka ukutya xa uhluthi. UJulia oneminyaka eyi-19 uthi: “Ndandidla ngokubala iicalories, kodwa ngoku ndithi ndakuhlutha ndiyeke ukutya.”
Sukutya ukutya okungenasondlo. UPeter oneminyaka eyi-21 uthi: “Xa ndayeka ukusela iziselo ezihlwahlwazayo ndehla ngeekhilogram ezintlanu ngenyanga nje enye!”
Tshintsha indlela engafanelekanga otya ngayo. UErin oneminyaka eyi-19 uthi: “Andikuphindi ukutya.”
Indlela Onokuphumelela Ngayo: Musa ukutsiba amaxesha okutya! Ukuba wenjenjalo, uya kulamba uze utye kakhulu.
Kakade ke, abanye abantu abathi “andifuni ukutyeba” bawujonga ngenye indlela umzimba, kanti akukho ngxaki ngemizimba yabo. Kodwa kuthekani ukuba ufuna ukwehla? Nantsi into eyenziwa yenye intombazana enguCatherine.
“Xa ndandikwishumi elivisayo ndandityebe ngokugqithisileyo yaye ndandingayithandi loo nto. Ndandisithi ndakuzijonga ndizicaphukele!
“Ndikhe ndizame ukunciphisa umzimba ngokutya izinto ezikhethekileyo, kodwa ndisuka ndibe ngathi ndithi chatha ukutyeba. Ndithe xa ndineminyaka eyi-15 ndazixelela ukuba kuza kufuneka nditshintshe. Ndandifuna ukwehla ngendlela efanelekileyo—indlela endandiza kuqhubeka nayo ubomi bam bonke.
“Ndathenga incwadi eyayithetha ngokutya okusempilweni nangendlela yokujima ndaza ndenza ezo zinto ndandizifunde kuyo. Ndandizimisele ukungayeki enoba kunokwenzeka ngenye imini ndingayilandeli ngokupheleleyo loo ndlela yokutya nokujima okanye ndisuke nje ndityhafe.
“Uyazi kwenzeka ntoni? Kwandinceda ukungayeki! Kunyaka nje omnye ndehla ngeekhilogram eziyi-27. Ndiye ndakwazi ukuwugcina umzimba wam uyile nto ndiyifunayo kangangeminyaka emibini. Ndandingatsho ukuba oko kunokwenzeka!
“Ndicinga ukuba esona sizathu sabangela oku kukuba kukuba andizange nditshintshe nje indlela enditya ngayo, kodwa le yaba yindlela endiphila ngayo.”—UCatherine, oneminyaka eyi-18.
Funda indlela omnye owayethanda ukutya okunesondlo owayoyisa ngayo loo ngxaki.